ဧပြီလ ၁၀ရက်နေ့ မှာ ထွက်ရှိမယ့် KYLIE ရဲ့ New LipKit များ | CosmeticMyanmar
Home » Article » ဧပြီလ ၁၀ရက်နေ့ မှာ ထွက်ရှိမယ့် KYLIE ရဲ့ New LipKit များ
ဧပြီလ ၁၀ရက်နေ့ မှာ ထွက်ရှိမယ့် KYLIE ရဲ့ New LipKit များ
Lipstick တွေနဲ့ နာမည်ကြီးလာခဲ့သော Kylie Jenner ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ KYLIE cosmestic ကတော့ New Lipstick ၄မျိုး ထွက်ရှိဖို့အတွက် ရက်အတိကျကို ကြေငြာလိုက်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါ ထွက်ရှိလာမယ့် နှုတ်ခမ်းနီအရောင်လေးတွေကတော့ crazy color ဆန်းဆန်းလေးတွေဖြစ်ပြီး အရင်ထွက်ရှိဘူးတဲ့ အရောင်တွေနဲ့ ကွဲပြားနေတာကို တွေ့ရမှာပါ။
NEW Lip Kits are coming!! Get ready to welcome these new shades to the family! Right to left: SAY NO MORE Velvet, IRONIC Matte, BOSS Matte and BARE Velvet! (You guys were all asking to bring Bare velvet back!) ❤💚💗 April 10 🌟
A post shared by Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics) on Apr 2, 2018 at 5:16pm PDT
Packaging ကတော့ အရင်ပုံစံအတိုင်းဘဲ မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရောင်တွေအနေနဲ့ Velvet, IRONIC Matte, BOSS Matte နဲ့ BARE Velvet ဆိုတဲ့ နာမည်တွေပေးထားပြီး အသားရောင်၊ စစ်စိမ်းရောင်၊ အနီရောင်နဲ့ ပန်းဆီရောင် အရောင်တောက်တောက်လေးတွေကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Nude color ကတော့ Kylie ရဲ့ နှုတ်ခမ်းနီတွေမှာ မြင်တွေ့နေကျ ဖြစ်ပေမယ့် နောက်ထပ် ၃ရောင်ကတော့ လူငယ်မိန်းကလေးအများစု ကြိုက်နှစ်သက်နိုင်တဲ့ အရောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆို အရောင်လေးတွေကို ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
3 NEW SHADES #APRIL10
A post shared by Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics) on Apr 2, 2018 at 5:20pm PDT
သွားတွေ ဖြူဖွေးစေဖို့ အတွက် ဘယ်လိုပြုလုပ်နိုင်မလဲ
အခုတော့ ကြေးညှော် တွေတာ့တာပေါ့!
0 မျက်နှာအသားအရေလေး ကြည်လင်စေဖို့အတွက် အိမ်တွင်းနည်လမ်းကောင်းလေး
1 နေ့စဉ်သုံးအရောင်လေးတွေကြောင့် လူကြိုက်များနေတဲ့ The Balm ရဲ့ Eye Shadow Palette
0 Revlon ရဲ့ PhotoReady Candid™ Collection လေးမှာ ဘာတွေပါမလဲ?
0 သဘာဝသစ်သီးနဲ့ ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Loreal ရဲ့ Purify & Unclog Kiwi Scrub
0 ချောမွေ့တောက်ပတဲ့ Glow skin လေးကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ Loreal ရဲ့ Smooth & Glow Grapeseed Scrub